“အကိုရေ” “အာသောက ကားမှတ်တိုင်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ” မေးသံကြားလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ … နပ်(စ်) မ လေး တစ်ယောက်... - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / ဖြစ်ရပ်မှန် / “အကိုရေ” “အာသောက ကားမှတ်တိုင်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ” မေးသံကြားလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ … နပ်(စ်) မ လေး တစ်ယောက်...
“အကိုရေ” “အာသောက ကားမှတ်တိုင်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ” မေးသံကြားလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ … နပ်(စ်) မ လေး တစ်ယောက်...
Apann Pyay 1:44 PM ပြည်တွင်းသတင်း , ဖြစ်ရပ်မှန် Edit
“အကိုရေ” “အာသောက ကားမှတ်တိုင်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ” မေးသံကြားလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ … နပ်(စ်) မ လေး တစ်ယောက်။ ( ကျောက်မြောင်းထဲ Special nurse လာလုပ်ပြီး အိမ်ပြန်နောက်ကျနေတဲ့ ဆရာမလေးဖြစ်မယ် ) တွေးပြီး “ဒီလမ်းအတိုင်း တည့်တည့်သွား လမ်းဆုံးရင် ညာဘက်ချိုးပါ ။
အာသောက မှတ်တိုင်ကို တွေ့လိမ့်မယ် ” လို့ လမ်းညွှန်ပေး လိုက်တယ် ။ ဒါပေမယ့် သူက မသွားသေးဘဲ “အကို ” “ဟို”. . . . လေ ။
ကျွန်မ ပိုက်ဆံအိတ် ကျ ပျောက် သွား လို့။ သမီးက သန်လျှင်ထိ ပြန်ရမှာ အဲဒါ ဖြစ်နိုင်ရင်ကားခလေး အကူအညီ ပေးပါ လား” . . . တဲ့ ။
(သူ့ခမျာ ဒုက္ခရောက်နေရှာတာဘဲ) လို့ တွေးပြီး ကားပါကင်စောင့်တဲ့ အဘိုးကြီးကိုပေးဖို့ ယူလာတဲ့ ၅၀၀ိ တန်ကို သူမ လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။ “ရော့ ” ညီမ ” “ဒါကိုယူသွား” လမ်းထိပ်မှာ သန်လျှင်ကို သွားတဲ့ ကြားကားတွေ ရှိတယ် ။ တစ်ယောက်ကို ၅၀၀ိ ပဲ ပေးရတယ် အဲဒါ စီးသွားလိုက်။
ဒါပေမယ့် သူမကပိုက်ဆံကိုမယူဘဲထပ်ပြောတယ်။ သမီးအမေနေမကောင်းလို့ အိမ်ကို မြန်မြန်ပြန်ရောက်အောင် ကား ငှားပြီးပြန်ချင်တာ။ ကားငှားလို့ရအောင် ၆၀၀၀ လောက် ခဏ ချေးပါလား။ သမီးက ဟို ရှေ့နားက အိမ်မှာ လူနာလာပြု စုတာပါ ။ ဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့မယ်လေ။
အကို့ ဖုန်းနံပါတ်လဲ ပေးပါ။ မနက်ကျရင် အကို့ဆီဖုန်းဆက်ပြီး လာပေးလိုက်ပါ့မယ် . . . တဲ့။ ( “ဒီ ကောင်မလေးတော့ ငါ့ကို အချဉ်ဖေါက် နေပြီ”) . . . တွေးပြီး “ဒါဆို ညီမ ဖုန်း ပေးထားခဲ့လိုက်လေ” လို့ ပြော လိုက်တော့ – – – “ဖုန်းက ပျောက်သွားတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ပါသွားတာ” . . . . တဲ့ဗျ။
(ငါ့ကို ဒါမျိုး လာစားလို့တော့ ဘယ် ရမလဲ ။ ငါလဲပြန်ကျပ်မယ်) လို့တွေးပြီး – – – “ဒါဆို ညီမ ကားပေါ်တက်” “သန် လျှင်ရောက်တဲ့အထိလိုက်ပို့ပေးမယ်” လို့ပြောလိုက်တော့ – – – မျက်နှာပျက်သွားပြီး “မပို့ပါနဲ့ ” . . .”အားနာစရာကြီး” “Taxi ဖိုးဘဲ ကူညီပေးပါ” တဲ့ဗျို့။
“ပေးစရာ ပိုက်ဆံတော့ ပါ မလာဘူး ညီမရေ ။ တခြားလူတွေဆီဘဲ အကူအညီတောင်းလိုက်ပါ” လို့ ပြောလိုက်တော့မှ အခြေအနေ မဟန်မှန်းသိလို့ လစ်သွားပါတော့တယ်။
သူထွက်သွားတော့ ကားကိုမရွှေ့ဖြစ်သေးဘဲ စဉ်းစားနေမိတယ်။ ဒီ ကောင်မ လေး ရုပ်ရည်လေး သနားကမားနဲ့ သူနာပြု ဝတ်စုံကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး လူတွေကို လိုက် လိမ် နေ တယ်။ ဒါမျိုး ဘယ်နှစ်ယောက်ကိုများ လိမ်ပြီးပြီလဲ မသိဘူး။
နောက်ထပ် လဲ လိမ်ဦးမှာဘဲ လို့တွေးပြီး သူ့နောက်က လိုက်ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကားမီးတွေ ပိတ်ပြီး မောင်း လာခဲ့တော့ “အမယ်” . . . “သူက နောက်ထပ်သားကောင်တစ်ယောက်ကို အမိ ဖမ်းနေပြီ။
Lexus ကားနဲ့ သူဌေး ပုံပေါက်တဲ့ ဘဲကြီး တစ်ပွေ ကိုဗျ ။ အဲဒါနဲ့ လမ်းဘေးကပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ ခဏ ကြာတော့ ဘဲကြီးက ပိုက်ဆံပေးမယ့်ပုံစံနဲ့ ကားထဲက ပိုက်ဆံအိတ်ကို လှမ်းအယူမှာ ကျွန်တော်က ကားကိုမောင်း ထွက်လိုက်ပြီး သူမ ဘေးမှာ ရပ်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့. . . “ညီမ ခုထိ မပြန်သေးဘူးလား” လို့ မေးလိုက်တော့ ဟိုလူကြီးပေးမယ့် ပိုက်ဆံကိုတောင် မယူ နိုင်တော့ဘဲ ပြေးတော့တာဘဲ ဗျို့ 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 ဒီလို ပုံစံ မျိုးစုံနဲ့ လိမ်စား နေကြတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
Friends တို့ကို လာပြီး အချဉ်ဖေါက်ရင် လည်း လွတ်အောင်ရှောင်နိုင်ကြပါစေ။
Credit toYan Naing
Source : goo.gl/Mo6Sr9
“အကိုရေ” “အာသောက ကားမှတျတိုငျကိုဘယျလိုသှားရမလဲ” မေးသံကွားလို့ လှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ … နပျ(ဈ) မ လေး တဈယောကျ။ ( ကြောကျမွောငျးထဲ Special nurse လာလုပျပွီး အိမျပွနျနောကျကနြတေဲ့ ဆရာမလေးဖွဈမယျ ) တှေးပွီး “ဒီလမျးအတိုငျး တညျ့တညျ့သှား လမျးဆုံးရငျ ညာဘကျခြိုးပါ ။
အာသောက မှတျတိုငျကို တှလေိ့မျ့မယျ ” လို့ လမျးညှနျပေး လိုကျတယျ ။ ဒါပမေယျ့ သူက မသှားသေးဘဲ “အကို ” “ဟို”. . . . လေ ။
ကြှနျမ ပိုကျဆံအိတျ ကြ ပြောကျ သှား လို့။ သမီးက သနျလြှငျထိ ပွနျရမှာ အဲဒါ ဖွဈနိုငျရငျကားခလေး အကူအညီ ပေးပါ လား” . . . တဲ့ ။
(သူ့ခမြာ ဒုက်ခရောကျနရှောတာဘဲ) လို့ တှေးပွီး ကားပါကငျစောငျ့တဲ့ အဘိုးကွီးကိုပေးဖို့ ယူလာတဲ့ ၅၀၀ိ တနျကို သူမ လကျထဲထညျ့ပေးလိုကျတယျ။ “ရော့ ” ညီမ ” “ဒါကိုယူသှား” လမျးထိပျမှာ သနျလြှငျကို သှားတဲ့ ကွားကားတှေ ရှိတယျ ။ တဈယောကျကို ၅၀၀ိ ပဲ ပေးရတယျ အဲဒါ စီးသှားလိုကျ။
ဒါပမေယျ့ သူမကပိုကျဆံကိုမယူဘဲထပျပွောတယျ။ သမီးအမနေမေကောငျးလို့ အိမျကို မွနျမွနျပွနျရောကျအောငျ ကား ငှားပွီးပွနျခငျြတာ။ ကားငှားလို့ရအောငျ ၆၀၀၀ လောကျ ခဏ ခြေးပါလား။ သမီးက ဟို ရှနေ့ားက အိမျမှာ လူနာလာပွု စုတာပါ ။ ဖုနျးနံပါတျပေးခဲ့မယျလေ။
အကို့ ဖုနျးနံပါတျလဲ ပေးပါ။ မနကျကရြငျ အကို့ဆီဖုနျးဆကျပွီး လာပေးလိုကျပါ့မယျ . . . တဲ့။ ( “ဒီ ကောငျမလေးတော့ ငါ့ကို အခဉျြဖေါကျ နပွေီ”) . . . တှေးပွီး “ဒါဆို ညီမ ဖုနျး ပေးထားခဲ့လိုကျလေ” လို့ ပွော လိုကျတော့ – – – “ဖုနျးက ပြောကျသှားတဲ့ ပိုကျဆံအိတျထဲမှာ ပါသှားတာ” . . . . တဲ့ဗြ။
(ငါ့ကို ဒါမြိုး လာစားလို့တော့ ဘယျ ရမလဲ ။ ငါလဲပွနျကပျြမယျ) လို့တှေးပွီး – – – “ဒါဆို ညီမ ကားပျေါတကျ” “သနျ လြှငျရောကျတဲ့အထိလိုကျပို့ပေးမယျ” လို့ပွောလိုကျတော့ – – – မကျြနှာပကျြသှားပွီး “မပို့ပါနဲ့ ” . . .”အားနာစရာကွီး” “Taxi ဖိုးဘဲ ကူညီပေးပါ” တဲ့ဗြို့။
“ပေးစရာ ပိုကျဆံတော့ ပါ မလာဘူး ညီမရေ ။ တခွားလူတှဆေီဘဲ အကူအညီတောငျးလိုကျပါ” လို့ ပွောလိုကျတော့မှ အခွအေနေ မဟနျမှနျးသိလို့ လဈသှားပါတော့တယျ။
သူထှကျသှားတော့ ကားကိုမရှဖွေ့ဈသေးဘဲ စဉျးစားနမေိတယျ။ ဒီ ကောငျမ လေး ရုပျရညျလေး သနားကမားနဲ့ သူနာပွု ဝတျစုံကို အလှဲသုံးစားလုပျပွီး လူတှကေို လိုကျ လိမျ နေ တယျ။ ဒါမြိုး ဘယျနှဈယောကျကိုမြား လိမျပွီးပွီလဲ မသိဘူး။
နောကျထပျ လဲ လိမျဦးမှာဘဲ လို့တှေးပွီး သူ့နောကျက လိုကျကွညျ့ဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။ ကားမီးတှေ ပိတျပွီး မောငျး လာခဲ့တော့ “အမယျ” . . . “သူက နောကျထပျသားကောငျတဈယောကျကို အမိ ဖမျးနပွေီ။
Lexus ကားနဲ့ သူဌေး ပုံပေါကျတဲ့ ဘဲကွီး တဈပှေ ကိုဗြ ။ အဲဒါနဲ့ လမျးဘေးကပျပွီးစောငျ့ကွညျ့နလေိုကျတယျ။ ခဏ ကွာတော့ ဘဲကွီးက ပိုကျဆံပေးမယျ့ပုံစံနဲ့ ကားထဲက ပိုကျဆံအိတျကို လှမျးအယူမှာ ကြှနျတျောက ကားကိုမောငျး ထှကျလိုကျပွီး သူမ ဘေးမှာ ရပျလိုကျတယျ။
ပွီးတော့. . . “ညီမ ခုထိ မပွနျသေးဘူးလား” လို့ မေးလိုကျတော့ ဟိုလူကွီးပေးမယျ့ ပိုကျဆံကိုတောငျ မယူ နိုငျတော့ဘဲ ပွေးတော့တာဘဲ ဗြို့ 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 ဒီလို ပုံစံ မြိုးစုံနဲ့ လိမျစား နကွေတဲ့သူတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။
Friends တို့ကို လာပွီး အခဉျြဖေါကျရငျ လညျး လှတျအောငျရှောငျနိုငျကွပါစေ။